किसानले धान धितो राखेर ऋण पाउने | Ekhabar Nepal
अर्थ मंसिर २० २०७५ ekhabarnepal
बुटवल उपमहानगरपालिकाको किसान लक्षित कार्यक्रम
बुटवल, मंसिर २० । बुटवल उपमनगरपालिकाले पहिलो पटक किसानहरुको धान धितोमा राखेर कृषि ऋण प्रदान गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरेको छ । यो कार्यक्रम यस क्षेत्रमै नमुना र पहिलो प्रयास हो ।
खेतीयोग्य जमिन मासिने र नाशिने क्रमले कृषि कर्मसमेत प्रभावित हुँदै गइरहेका बेलामा कृषिमा आकर्षण बढाउन यस्तो अभियान सुरु गरिएको उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताउनुभयो । उपमहानगरले अनुदानका रुपमा किसानलाई वितरण गरेको मौलिक पोषक विऊबाट उत्पादित धानलाई धितोका रुपमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
किसानले उत्पादन गरेको धानलाई टोलकै सहकारीमा धितो राखेर सहकारी मार्फत किसानलाई ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम यस क्षेत्रको नयाँ अभियान हो । धानखेतीका लागि उपयुक्त योजना अनुसार विहिबार बुटवल–१४ सेमलारमा रहेको सिम्रीक कृषि सहकारी संस्था र बुटवल उपमानरपालिकाको विचमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
बुटवल उपमानरपालिकाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र सिग्देल र सिम्रीक कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गणेशबहादुर गाहाले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । बुटवलको सेमलार, मोतिपुर क्षेत्रका किसानहरुले उत्पादन गरेको धान उचित भण्डार स्थानको अभावको कारण उचित मुल्य विना नै विक्रि गर्दै आएका थिए ।
अव किसानहरुले सहकारीमा आफु्ले उत्पादन गरको धानलाई सहकारीमा धितोको रुपमा राखेर कृषि ऋण लिन सक्छन् । किसानहरुले यसरी उत्पादन गरेको धान सहकारीमा राखेमा कुनै पनि भाडा तिनुपर्र्दन । किसानको भाडा नगरपालिकाले तिरिदने छ । त्यसक्षेत्रको करिब तीन हजार हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको अनुमान छ । ती खेतहरुमा सिंचाईको समेत प्रबन्ध छ ।
सेमलार र मोतिपुरका खेतियोग्य जमिनलाई थप प्लटिगं हुन नदिई र अहिलेका त्यहाका बस्तीलाई समेत व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्वन्धमा स्थानीय किसानहरुबीच छलफलसमेत चलिरहेको उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताउनुभयो । किसानहरु आपसमा सहमतिमा आएका एक गाउ एक बस्ती बनाएर बाकी जग्गामा व्यवसायीक खेति गर्ने सोच उपमहानगरपालिकाको रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र सिग्देलले किसानहरुको समस्यालाई सामाधान गर्नको लागि पहिलो चरणमा किसानहरुको धानलाई भण्डारणमा अनुदान प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै अब प्रोत्साहनका नयाँ कार्यक्रम बनाइने बताउनुभयो । आगामी दिनमा अन्य गहुँ, दाल जन्य कृषि उपज समेत भण्डार गरी किसानहरुलाई ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
उपमहानगरका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ भीमनाथ शर्माका अनुसारसाबिकको मोतिपुर र सेमलार गाबिसमा पर्ने ६ वटालाई उपनगरपालिकाले कृषिमा बिशेष प्राथमिकता दिने योजना बनाउँदै छ । किसानहरुले उत्पादन गरेको धानलाई सहकारीमा भण्डारण गरे बापत सहकारीले लिने भाडा रकम नगरपालिकाले प्रदान गर्ने छ । जसको लागि नगरपालिकाले २ लाख ५० हजार रुपैयाँको सम्झौता सहकारीमार्फत गरेको हो ।
किसाले यसरी भण्डारण गरेको धानलाई धितोको रुपमा सहकारीले स्वीकार गरी ऋण समेत प्रदान गर्ने सम्झौता गरिएको छ । ऋण चुत्ता पश्चात किसानले आफ्नो धान विक्रि गर्न पाउने सिम्रीक कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गणेशबहादु गाह मगरले जानकारी दिनुभयो । सहकारीका सचिव टोपनारायण घिमिरेका अनुसार वि.स. २०६६ सालमा स्थापना भएको सहकारीले आईडब्लु आरएमपीको अनुदानमा विउ प्रसोधन केन्द्र, भण्डारण केन्द्र समेत स्थापना गरेर सञ्चालन गर्दैै आएको छ । १० कठ्ठा क्षेत्रफल रहेको सहकारीले दुई सय ५० मेट्रिक टन को ओपनज सेड निर्माण गरेको छ भने एक हजार पाँच सय मेट्रीक टन र अर्को दुई सय ५० मेट्रिक टन क्षमताको गोदाम घर निर्माण गरेको छ ।
खेतियोग्य जमिन संरक्षण तथा किसानका लागि प्रोत्साहन अभियान
अहिले प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको र व्यवस्त बजारका रुपमा विकसित भएको क्षेत्र साँघुरो भएको छ । यहाँ घरैघर भरिएका छन् भने नदी किनारहरुसमेत सुकुम्बासीका नाममा पूरै ढाकिएको छ । तर, बुटवल उपमहानगरपालिकामा यो भन्दा धेरै क्षेत्रफल रहेको ठाउँमा खेतीपाती हुँदै आएको छ । साविकका मोतिपुर र सेमलार गाविस बुटवलमा गाभिएपछि उपमहानगरपालिका बनेको हो । ती क्षेत्रका साथै वडा नं. १२–१९ का कैयौं क्षेत्रहरु खेतियोग्य छन् । त्यहाँका जमिनलाई उर्वरा बनाउँदै थप प्लटिगं हुन नदिन उपमहानगरपालिकाले किसानलाई प्रोत्साहनको कार्यक्रम सुरु गरेको नगर शिवराज सुवेदीले बताउनुभयो ।
बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्र व्यापारका लागि उपयुक्त भएपनि वडानम्वर १४ देखि १९ सम्मका ६ वटालाई केन्द्रित गरी यस्तो अभियान सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ती क्षेत्रमा व्यवसायीक तरकारी खेति, माहुरी पालन, च्याउ खेतिका तालिम, गरीवलाई निशुल्क तथा अनुदानमा बिभिन्न बालीका बिउ बितरण, निशुल्क माहुरीका घार बितरण, निशुल्क भुरा माछा बितरण लगायतका कार्यक्रम अघि सारिएको उपमहानगरपालिका प्रवक्ता तथा वडा नं. १६ का अध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो ।